Wararka Suuqa Kala Iibsiga Maanta: Manchester United Oo Ku Dhow Heshiiska Raphael Varane, Iyo Qodobo Kale
HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Manchester United oo ku dhow Heshiiska Raphael Varane, iyo Qodobo kale
July 13, 2021 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Manchester United ayaa ku dhow inay heshiis shaqsi ah la gaarto daafaca reer France ee Real Madrid Raphael Varane, oo 27 jir ah, kaasoo muddo dheer diirada u saarnaa xirfadiisa daafaca Harry Maguire. (manchesterevening news)
Hector Bellerin ayaa u sheegay Arsenal inuu doonayo inuu baxo xagaaga suuqa kala iibsiga. 26 jirkaan daafaca reer Spain, kaasoo ah mudada ugu dheer katirsanaa Mikel Arteta safkiisa koowaad, isagoo rajeynaya inuu udhaqaaqo Inter Milan . (Metro)
Manchester City ayaa meesha ka saartay u dhaqaaqista weeraryahanka kooxda Barcelona ee reer France Antoine Griezmann oo 30 jir ah laakiin waxa ay kor u qaadi doontaa xiisaha ay u qabto weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund iyo reer Norway ee Erling Braut Haaland oo 20 jir ah iyo kabtanka kooxda Tottenham ee reer England Harry Kane oo 27 jir ah (Sun)
Chelsea ayaa qarka u saaran inay ‘dalab weyn’ ka gudbiso Haaland. (dailystar)
Griezmann ayaa laga yaabaa inuu dib ugu laabto kooxdiisii ​​hore ee Atletico Madrid , isagoo qeyb ka noqonaya isdhaafsi khadka dhexe ee Spain Saul Niguez, 26. (Express)
Bayern Munich ayaa raadineysa inay la soo wareegto bedelka 32 jirka weerarka ka ciyaara Poland Robert Lewandowski, kaasoo laga yaabo inuu u dhaqaaqo Real Madrid xagaaga soo aadan marka uu hal sano uga harsan yahay qandaraaskiisa kooxda Jarmalka. (AS)
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ciyaaryahanka khadka dhexe ee Real Madrid Isco – tan iyo markii la tirtiray – wuxuu si maldahan u sheegayaa in ciyaaryahanka reer Spain uu bixi doono marka 12ka bilood ee ugu dambeysa qandaraaskiisa uu dhacayo, iyadoo xiisaha ay ka diiwaan gashan yihiin Arsenal , Tottenham Hotspur iyo Napoli (Mirror)
Manchester City iyo Wolverhampton Wanderers ayaa labaduba baadi goob ugu jira 23 jirka daafaca Fulham Antonee Robinson. (Mirror)
Juventus ayaa diirada saareysa weeraryahanka reer Brazil ee kooxda Manchester City Gabriel Jesus, oo 24 jir ah kooxda reer Talyaani ayaa sidoo kale liiskooda waxaa ku jira weeraryahanka reer Italy iyo kooxda Everton Moise Kean oo 21 jir ah (Tuttosport)
Arsenal ayaa u dhaw inay heshiisyka ay ku soo qaadaneyso kubad sameeyaha 23-sano jirka ah Houssem Aouar iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Belgium Albert Sambi Lokonga, 21, ka Anderlecht. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Leicester City iyo England James Maddison, 24, ayaa sidoo kale isha lagu hayaa. (sun)
Tababaraha cusub ee Crystal Palace Patrick Vieira ayaa saf ugu jira goolhayaha reer England Remi Matthews, oo 27 jir ah, kaasoo ay dhawaan fasaxday League One Sunderland. (Mirror)
Kooxda heerka labaad ee Bournemouth ayaa isha ku heysa inay lasoo saxiixato 22 jirka khadka dhexe ee reer England Flynn Downes oo ka socda kooxda ka ciyaarta heerka 1aad ee Ipswich Town. (Bariga Anglian Times)
West Brom ayaa isku dayaysa inay lasoo saxiixato ciyaaryahanka khadka dhexe ee Ingariiska Trevoh Chalobah, oo 22 jir ah kana soo jeeda Chelsea laakiin tartan ayay kala kulmi karaan Brentford, iyo kooxda Faransiiska ee Lorient, iyo kooxo kale. (Express & star)